Sagrada Familia - usoro Netflix ọhụrụ | Bezzia
Susana godoy | 12/10/2021 14:00 | Akụkọ
Netflix na -aga n'ihu na -eju anya mgbe ụfọdụ. N'ihi na ọ bụ eziokwu na oge ọ bụla ọ na -ebupute usoro atụmatụ dị ka ọdịnaya, mana na nke a, ọ na -enye nnukwu ihe ijuanya mgbe ọ na -akpọsa ezinụlọ dị nsọ. Otu n'ime usoro Spanish nke nwere nnukwu ihe nkedo na nke amabeghị ihe dị ugbu a, mana nke ga -enye ọtụtụ ihe ikwu maka ya.
Kemgbe ugbu a ọ na -eme ya na naanị nkọwa ole na ole ka amaara. Ụfọdụ n'ime ha bụ naanị site na netwọkụ mmekọrịta ụfọdụ yana ụfọdụ ndị isi echiche. Mana o kwesịrị ka akpọtụ ya aha n'ihi mgbe m rutere na obere ihuenyo ọ ga -abụ nnukwu mgbanwe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ezie. Chọpụta ihe niile gbasara ya!
1 Netflix tụrụ n'anya
2 Ole ndị bụ ndị ama ama Sagrada Familia?
3 Echiche sitere n'aka Manolo Caro
Netflix tụrụ n'anya
Ọ bụ eziokwu na Netflix na -abịa tụrụ anyị n'anya mgbe ụfọdụ n'ihi na nwere ọdịnaya sara mbara n'ezie. N'etiti usoro na ihe nkiri, mgbe ụfọdụ anyị na -enwe nkụda mmụọ n'ihi na anyị amaghị nke anyị ga -ahọrọ. Ọ bụkwa eziokwu na mgbe ụfọdụ anyị na -eche maka izizi n'ihi na ekwuputala ya n'elu ikpo okwu, ka anyị niile nwee ike ịme ụdị atụmatụ. Mana na nke a, ọ dịbeghị ka nke a ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịtụnanya ụbọchị ọmụmụ, ozi na -abịa na usoro Spanish ọhụrụ bụ ọrụ nke ikpo okwu. Mana ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ọ nwekwara ihu ndị ama ama na mpaghara mba na ndị na -abịa site n'ịghọrọ ọtụtụ ihe ịga nke ọma ndị ọzọ.
Ole ndị bụ ndị ama ama Sagrada Familia?
Najwa Nimri Ọ bụ otu n'ime ihu ndị ama ama na mpaghara mba. Ọ malitere ịrụ ọrụ na Santiago Segura mana ya na Amenábar wụliri elu, ruo mgbe ọ nwetara otu n'ime ọrụ ama ama ya n'usoro 'Vis a Vis'. N'ezie anyị enweghị ike ichefu oge ọ sonyere na 'La casa de papel'. Ugbu a ị ga -eju anya na Sagrada Familia, anyị ji n'aka. Alba Flores onyonyo onyonyo bụ Aha ọzọ dị ukwuu nke na -enweta ike na enweghị ihe ijuanya. Na mgbakwunye na ịbụ onye mmekọ Najwa, ọ na -alaghachi ugbu a ka ọ bụrụ akụkụ nke nnukwu ihe nkedo nke obere ihuenyo ahụ. Abụọ 'Vis a Vis' na 'La casa de papel' emeela ka o nweta ọtụtụ ihe nrite.
Mana ọ bụkwa na nkedo mejupụtara Carla Campra na -eto eto nke anyị hụrụ na 'akwụkwọ ndekọ nzuzo nke onye nọ n'afọ iri na ụma' yana 'Ele ọzọ'. 'Fugitivas' ma ọ bụ 'Ánimas' bụ ụfọdụ aha anyị hụla ka Iván Pellicer na -arụ ọrụ. Na mgbakwunye, onye ọzọ bụ ezigbo ndị enyi ya bụ Macarena Gómez, onye anyị kacha mara maka ọrụ ya Lola na 'Onye Na -abịa', mana ọ nwekwara ogologo akụkọ n'azụ ya.
Echiche sitere n'aka Manolo Caro
Na mgbakwunye na ihu niile ama ama, nke na -adịghị ole na ole, Manolo Caro kwuru ebipụtala na soshal midia ha. Ịkọwa ebe echiche ịrụ ụdị ọrụ a siri bịa. Ọ dị ka ọ bụghị ihe ọhụrụ, mana na ọ bụ ihe echebara echiche karịa n'ihi na ihe karịrị afọ abụọ o nwere echiche na ọchịchọ inwe ike inye ọha ihe o bu n'obi. Ee, ọ bụ ya ka ọ na -ahụ maka 'The House of Flowers', nke bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ọzọ. Site n'ihe ọ dị ka, ndekọ a amalitela ma na -eme na Madrid. Yabụ na akụkọ nke usoro dị otu a apụtala, onye ọ bụla na -eche maka akụkọ, iji nwee ike ịnụ ụtọ ihe ọzọ, mmetụ nke nkata ahụ ma ọ bụ ihe odide ya n'ozuzu ya. Ị ga -ahụ ya ma ọ pụta?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Sagrada Familia: Usoro Spanish Netflix ọhụrụ